Maxaad ka taqaanaa cudurka qalalka, (Epilepsy)? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maxaad ka taqaanaa cudurka qalalka, (Epilepsy)?
A warsame 7 April 2015
Mareeg.com: Cudurka qalalka wuxuu hayaa dad badan oo Soomaaliyeed, kuwaasoo ku jira da’o kala duwan. Cudurkaas ayaa ah mid dadka qaba ugu soo booda si kedis ah, oo marka oo qofka ka fuqo uu haddana iska soconayo, inkastoo laga dareemayo culeyska ka haleelay qalalitaanka. Haddaba qaar ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliya ayaa isku dayey iney bulshada wax ka baraan cudurkaas.
Dr. C/kariim Xaaji Xasan oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo ku taqasusay cudurada Neerfaha (Neurology) ayaa cashar ku saabsan cudurka Qalalka (Epilepsy) ka bixiyey xarunta Jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Munaasabada dhegeysiga casharkan ayaa waxaa ka soo qeyb galay maamulka, Macalimiinta, qaar ka mid ah hormuudyada kuliyadaha, ardayda wax ka barata kuliyadda caafimaadka ee Jaamacada Banaadir qaarkood iyo marti sharaf kale.
Waxaa ugu horeyn kulankan ka hadlay Dr. Maxamed Max’uud Biday oo ah hormuudka kuliyadda caafimaadka ee Jaamacada Banaadir oo ka faalooday kaalinta uu bahda caafimaadka kaga jiro Dr. C/kariim Xaaji Xasan oo uu sheegay inuu ka mid ahaa dhaqaatiirtii ka qelin jebiyey Jaamacadda umadda sanadkii 1982-dii- wuxuuna xusay inuu taqasus u aaday dalka Talyaaniga, uuna ka soo shaqeeyey meelo badan, inta uusan dalka ku soo laabana uu agaasime ka ahaa Isbitaal ku yaala magaalada Roma ee dalka Talyaaniga.
“Wuxuu halkaas uga soo tagay isagoo shaqeysanaya inuu aqoontiisa la wadaago ardayda Soomaaliyeed waxaana xusid mudan in Dr. C/Kariin uu yahay dhaqtarka kaliya Somalia ee ku taqasusay cudurada neerfaha marka laga reebo dhaqtar kale oo hadda aan meelna lagu sheegin, wuxuuna marti u yahay maanta jaamacada Banaadir anigoo ku boorinaya inta nasiibka u yeelatay iney ka faaiideystaan casharkan qiimaha badan” ayuu yiri Dr. Biday.
Intaas ka dib waxaa hadalkii qaatay Dr. C/kariim Xaaji Xasan oo inta uusan guda gelin casharkiisa ku amaanay maamulka iyo macalimiinta Jaamacada Banaadir kaalinta ay kaga jiraan sare u qaadida aqoonta ardayda Soomaaliyeed.
Dr. C/kariim ayaa si xeeldheer uga hadlay taariikhda cudurka qalalka iyo xiliga la ogaaday, waxyaabaha keena, calaamada lagu garto, dhibatooyinka qofka ka soo gaara, waxyaabaha looga baahan yahay qofka qaba iyo hababka ugu wanaagsan ee loo daweyn karo.
“Cudurka qalalka waxaa uu ka mid yahay cudurada ku dhaca maskaxda ee dhibaatooyinka ku haya aadanaha, noocyo badan ayuu leeyahay weyna kala qatarsan yihiin, wuxuu ku dhici karaa meel kasta oo maskaxda ka mid ah waana nabar maskaxda ka soo baxa qeyb ka mid ah maskaxda oo mararka qaarkood ku dhasha meelo halis ah oo aan waxba qaban karin” ayuu yiri Dr. C/kariin.
Intii uu bixinayey casharkan oo socday ku dhowaad labo saacadood ayaa dhaqtartku waxaa uu sharaxaad badan ka bixiyey cudurka qalalka oo xusay inuu yahay cudur khatar ah oo sababa inuu qofku miyir doorsoomo xaalad walba oo uu ku jiro, isagoo dhinaca kale sheegay in bulshooyinka laga heli karo cudurkan ay ku jiraan Soomaalida, wuxuuna ardayda ka faa’ideysatay casharkan uga jawaabay su’aalo ku saabsanaa cudurka qalalka.
Ugu dambeyn waxaa kulankaas Khudbad kooban ka jeediyey gudoomiyaha Jaamacada Banaadir Dr. C/risaaq Axmed Dalmar oo u mahad celiyey Dr. C/kariim Xaaji Xasan, wuxuuna xusay in casharkan uu ku soo aaday xili muhiim ah oo loo baahnaa in dadku ay wax badan ka ogaadaan cudurka Qalalka, wuxuuna xusay in dhaqtarku uu dhowaan ka mid noqon doono macalimiinta wax ka dhigi doona kuliyada Caafimaadka ee jaamacada Banaadir taasoo uu sheegay iney guul u tahay Jaamacada.
“Jaamacadda Banaadir waxaa saaran masuuliyad heer qaran ah oo ku saabsan dhinaca caafimaadka dalka haddii ay noqon laheyd dhinacyada cilmi baarista, wacyi gelinta iyo daryeelka caafimaadka intaba maadaama ay wax ka bartaan ardayda ugu badan dhinaca caafimaadka dalkeena, macalimiinta ugu khibrada badan kana qelin jebiyeen ardayda ugu badan dhinaca caafimaadka” ayuu yiri Dr. Dalmar Rectorka Jaamacada Banaadir.
Qarax miino oo todobo qof ku dhaawacay Gaalkacyo
Maareeye iyo Nile Wigan oo ku kulmay Muqdisho